I-China ibinomthwalo osindayo we-Duty slurry Pump (Repalce AH) abakhiqizi nabaphakeli | damei kingmech futha
Amandla: 3-5000m3 / h
Okubalulekile: Cr27, Cr28, CD4MCu, impahla yenjoloba yenjoloba
Uphawu:uphawu lokupakisha, uphawu lokuxosha, uphawu lwe-mechnical.
Uhlobo HAD futha kuthiwa cantilevered, enezingqimba, centrifugal slurry pumps.They kufanelekile ukuletha ongaphakeme kwabantu slurries for metallurgical, izimayini, amalahle kanye nokwakha impahla department.The shaft uphawu usebenzisa kokubili indlala uphawu futhi uphawu centrifugal.
Thayipha amaphampu we-HAD asebenza ngejubane elikhulu ngamanani amancane ukonga indawo yaphansi. Amapuleti ohlaka anezinhlaka zenjoloba zensimbi ezishintshayo, ezingagqoki futhi impeller yenziwa ngensimbi noma iraba engamelana nokugqoka.
Amaphesenti amaningi wemisebenzi avumela ukusetshenziswa kophawu lwe-centrifugal oluqeda isidingo sokuvala amanzi.
Indlala shaft uphawu
I-gland shaft seal egcwele phama iyatholakala futhi ingafakwa ukugeleza okuphansi noma ilungiselelo lamanzi lokugeleza okugcwele.
Shaft futhi eziveza inhlangano
I-shaft enkulu enobubanzi obuningi obuncishisiwe inciphisa ukuphambuka nokudlidliza.
Inombolo ephansi uma ngamabhawodi ibamba isigaxa sepompo kufreyimu .Izindlela zokulungiswa kwempepho zinikezwa endaweni elula ngaphansi kwezindlu eziqukethe.
Hlukanisa izingcezu zangaphandle zensimbi yensimbi noma i-ductile yensimbi iqukethe ama-liners okugqoka futhi inikeze amandla okucindezela okuphezulu.
I-impeller ingahle ibe yi-elastomer ebunjiwe noma insimbi eqinile.Amanzi wokufaka uphawu ojulile ohlangothini anciphisa ukucindezela kophawu futhi anciphise ukuphindaphinda.
Imicu yokusakaza yokufaka ngaphakathi ilungele kangcono ama-slurries.
Izinsimbi eziqinile nezishintshayo ezibunjiwe ze-elastomer.
Ubuso bokukhwelana obufakwe ezintanjeni zensimbi eqinile buthephiwe ukuvumela ukuqondanisa okuhle ngesikhathi somhlangano futhi kuvumela izingxenye ukuthi zisuswe kalula ukuze zishintshwe.
Amasongo e-Hydraulic seal anika uphawu oluhle phakathi kobuso bokumatanisa.
I-Alumina, izimayini zethusi, i-Iron ore, uwoyela wegesi, amalahle, imboni kagesi, i-Phosphate, i-Bauxite, igolide, i-Potash, i-Wolfram, izinsiza zamanzi okuhambisa indle, Ushukela, Ugwayi, Umanyolo wamakhemikhali.
Langaphambilini I-GPD General Purpose Mpo Eqondile (Repalce GPS)
Olandelayo: I-HADPP Heavy Duty Abrasive Slurry Pump In Series (Phindisela i-AHPP)
I-HADPP Heavy Duty Abrasive Slurry Pump Kuchungechunge ...